မြန်မာမိန်းခလေးမို့ တင်ပြ ပါသည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြန်မာမိန်းခလေးမို့ တင်ပြ ပါသည်
မြန်မာမိန်းခလေးမို့ တင်ပြ ပါသည်
Posted by ေႏြဦး on Mar 17, 2012 in Copy/Paste, Other - Non Channelized | 29 comments
ကြည့် ကောင်းပေမဲ့ မြင်မကောင်း ဘူးနော်
အခုနှစ် ဒီမိုကရေစီ မြန်မာ့သင်္ကြန်မှာတော့ ဘယ်လို လာမလဲ မသိ။
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ပဲ လိုချင်ပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြသခွင့်တွေ မကြည့်ချင်ပါဘူး။
နင်တို့ကို ပေးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာချပိုင်ခွင့်မပါပါဘူး။
ဒါမျိုးဝတ်ပြလို့လဲ ဘယ်သူကမှ ညည်းတို့ကို သောက်ထင်မကြီးပါဘူး။
ဟော့ရမ်းတဲ့ အမျိုးသမီးများ ဆင်ခြင်ဖို့ပါ။
by: Linn Yaung face book မှ ကူးယူ တင်ပြသည်…
သင်္ကြန် ရောက်မှ ဟုတ်ဖူး ထင်တယ် …၊
ဒီပုံစံ မျိုးဆန်ဆန် တွေ ရန်ကုန်မယ် နေရာ အနှံ့ တွေ့မြင်နေရပါတယ်…၊
ခု ခေတ်ကြီးက ဘယ်လိုပါလိမ့်ဗျာ ..၊
မိဘ က သားသမီးကို ဒီလိုမလုပ်နဲ့ ဒီလိုမနေနဲ့ ၊ ဒီပုံစံ ငါတို့ မကြိုက်ဖူး
ဆိုဆုံးမ ပေမဲ့ သိပ် မအောင်မြင်သလိုခံစားရတယ် ..၊
ဒါကြောင့်မို့ တချို့ကိစ္စတွေလဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုး…၊
ဒါ့ကြောင့် ဒီလို ဖြစ်နေကြတယ်နဲ့ တူရဲ့….။
ရွာထဲက ထောက်လှန်းရေးသမားတွေနဲ့တွေ့ရင် ဒုက္ခ
ဒီနှစ်သင်္ကြန်တော့ ၅ရက်ဆိုတော့ ဘယ်လောက်များ ပြဲလန်နေကြမလဲမသိ
ရှုပ်ပါတယ် ဗုံးပေါက်ပေးလိုက် နားအေးတယ်
Gazette က မမလေးတွေလဲ ဘယ်နေရာသွားသွားနည်းနည်းလေးတော့လုံအောင်ဝတ်သွားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်..
အဲလိုကောင်မမျိုးတွေ ပါဆယ်ထုတ်ပြီး တရုတ်ပြည်ပို့ရင်
ဒီလို နန့်နေလို့လဲ မြန်မာမိန်းမတွေဆို ဘယ်သူမှအထင်မကြီးတာ
အဆင့်ရှိတဲ့ ဘယ်ယောင်္ကျားလေးကို မှ မမြူဆွယ်နိုင်ပါဘူး…
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ အဆင့်နဲနဲရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေ
ပြည့်တန်ဆာတွေ အများဆုံးဝတ်လေ့ရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းပါ။
(ဒီစကားကိုငြင်းချင်ရင် မငြင်းခင် ပြည်လမ်း ခြောက်မိုင်ခွဲ၊ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းနဲ့
အလားတူ ကျော်စောတဲ့နေရာတွေမှာ သွားကြည့်ပြီးမှ ငြင်းပါ။)
မစင်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ မုန့်/စားစရာလို့ မြင်/ကြား/ထင် ထားမိရင်
ဘယ်လောက်လှအောင် မွှေးအောင် စားချင်စရာကောင်းအောင် လုပ်ထားထား
ဘယ်သူမှ စားချင်စိတ်ပေါက်မှာ မဟုတ်လို့ပါပဲ….။
မဟာ ထမိန်ကြီးဝါဒ says:
ဦးလေးကို ထောက်ခံပါတယ်ဗျို. ။ ပို.စ်နဲ.တော့ မဆိုင်ပေမယ့် လူငယ်များနဲ.
သက်ဆိုင်တယ်ထင်လို.ပြောရဦးမယ်…ကျနော်က အခါကြီး ရက်ကြီးအခါမျိုးတွေမှာ မိဘဘိုးဘွားများအပြင် အလုပ်ရှင်ကိုပါသွားပြီး ကန်တော့လေ့ရှိပါတယ်..အဲဒီ့မှာ
ဘာတွေ.လည်းဆို တော့ အလုပ်ရှင် ခြံထဲမှာ ခိုင်းထားတဲ့ ခြံစောင့်၊ သန်.ရှင်းရေး ဝန်ထမ်း၊ အိမ်ဖော်၊ ဒရိုင်ဘာ အစ ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ ဆံပင်ဆေးဆိုး၊ နားကပ်တဖက်တပ်ထားတဲ့လူနဲ. ဆေးမင်ကြောင်ထိုးထားပြီး ဆံပင်ရှည်ထားတဲ့လူနဲ. အမျိုးမျိုး
ဖြစ်နေကြတာပါပဲ..အလုပ်ရှင် မိသားစုများဟာ အတော်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတွေပါပဲ…
သူတို.ဝန်ထမ်းတွေ ဒီလိုဖြစ်နေကြတာဟာ တမင်တကာကို မြှောက်ပေးထားကြတာပါ..
မင်းတို.တွေ အထင်ကြီးနေတဲ့ အတုခိုးနေတဲ့ ခေတ်ပေါ်ဝတ်စားနေထိုင်မှုတွေဟာ ငါတို.အိမ်
မှာခိုင်းထားတဲ့ ကျွန်တွေသာသာပါပဲလို.ပါးစပ်ကထုတ်မပြောပဲနဲ.ကို ပြောနေသယောင်ပါပဲ..သူတို.သားသမီးတွေကျတော့ဗျာ..လူရည်သန်.လေးတွေ…ကြည့်လိုက်ရင် ရှင်းသန်.နေတာပဲ..ဒီလို အကျင့်စရိုုက်မျိုးရှိတဲ့ လူငယ်တွေဟာ သူတို.အိမ်ကိုဝင်ထွက်သွားလာမိခဲ့ရင် ဒီဝန်ထမ်း
တွေကိုကြည့်ပြီး ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ထဲကသိကအောက်ဖြစ်လိမ့်မလဲလို.တွေးရင်း
ပြုံးမိပါတယ်..နောက်ပြီး ကျနော် အစွန်းရောက်တဲ့ စကားပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး
နေထိုင်မှုရှိတဲ့ လူငယ်တွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို.ယွင်းမှု၊ မိသားစု ပြသာနာ၊ စရိုက်ကျမှု၊
ပညာအခြေခံ အားနည်းမှု တခုမဟုတ်တခု ရှိနေတတ်ကြတာပါပဲ..သူတို.မှာ လူအထင်ကြီး
လောက်တဲ့ ဂုဏ် မရှိတဲ့အတွက် လူတွေမကြည့်ကြည့်အောင်..စိတ်ဝင်စားအောင် ကြံဖန်ပြီး
လိုက်နေရင် နောင်အသစ်အသစ်တွေ ပေါ်လာတဲ့အခါ တချိန်ကျ ရိုးသွားကြမှာပဲ..ရိုးရှင်းစွာ
နေထိုင်မှုကသာ ဘယ်တော့မှ မရိုးတော့ပါဘူး…..
ဘယ်က ဟာကြီးလဲ.. တကယ်ကော ဒီတိုင်းပြည်က ဟုတ်ရဲ့လား.. ရှာရှာပေါက်ပေါက် တော်တော် ရိုက်တတ်တယ်။
ုသင်္ကြန်ကာလ လို့ပြောလို့ရပေမယ့် ဒါမျီုးကတော့ လက်ခံနိုင်ပေါင်…….
သွားလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့မိန်းကလေးတွေထဲ မိန်းမပျက်တွေရောနှောပါဝင်နေတယ်ဆိုတာ … စာရေးသူတို့ .. စာဖတ်သူတို့ .. အမြင်မမှားစေလိုပါဘူး … ။ အဲ့ဒီဓါတ်ပုံမြင်ဖူးတာ ကြာပါပြီ … လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်ကဖြစ်မယ် … ။ အဲ့ဒီအချိန် .. စကတ်တိုဝတ်တာတွေ ဒီလောက်ခေတ်မစားသေးဘူးနော် သူ့အဝတ်စားကိုကြည့်ပြီး …. ဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ် … ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ .. ကျွန်မတို့ ချောင်းသာသွားတုန်းက … မိန်းမတစ်ယောက် ဘဲလေး စကတ်လိုအတိုအထပ်ထပ်ကိုဝတ်ပြီး .. အောက်က စတော်ကင် ဇာပေါက်ကြဲကြဲ ဝတ်ထားတာ … သူ့ဘောင်းဘီတောင်မြင်ရတယ် … ဒါကိုသူလည်း သိသိကြီးနဲ့… လမ်းသလားနေတယ် … ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တာမှ လက်ကိုယားနေတာပဲ(အခွင့်ရေးမရခဲ့ဘူး) … သူ့ဘေးမှာလည်း … အီမိုလိုလို … ပုံမကျ ပန်းမကျ အကောင်တွေ တသိုက်ပါသေးတယ် … ။
ပြောရလျှင် ..လူတစ်ယောက်ရဲ့ .. အဝတ်စားရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တတ်မှုနဲ့ အပြောဆိုအပြုမူ အနေထိုင်က … သူ့ရဲ့ စရိုက်ကို တိုက်ရိုက်ပေါ်လွင်စေတတ်တာမျိုးပါပဲ … ။
ဘယ်နှယ့်ဗျာ ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် …
ပုံထဲက ဟာမ က တကယ့် မြန်မာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဆို စိတ်ဓာတ် အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ သူတော့ ဟုတ်မယ် မထင်ဘူး …။
ရိုင်းရိုင်း ပြောရရင် ကြက်မ ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် …
မနှစ်က ညီမလေးတွေကောင်းမူနဲ့ မဏ္ဍပ်ထိုင်ဖြစ်တယ် မဏ္ဍပ်ထဲမှာ ဒီလိုပုံမျိုးစင်စင် ဝတ်စားထားတဲ့ သူတွေလည်းရှိသလို ခေတ်နဲ့အညီ အမြင်မရိုင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးဝတ်ထားတဲ့ သူတွေလဲရှိပါတယ် ။ သင်္ကြန်ဆို လူငယ်သဘာဝ ပျော်ကြပါးကြပင်မယ့် အရမ်းကြီးလွန်ကျူးတာမျိုးကတော့ မကောင်းဘူးထင်တယ် ။ မဏ္ဍပ်မှာဆိုလည်း အရမ်းအမူးလွန်လို့ ထမ်းထုတ်သွားရတဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်းမနည်းဘူးပဲ …:(
အေ့ ဂီလောက်လေးနဲ့တော့ တက်မလာခဲ့နဲ့ မင်းအုပ်စိုးလိုသတ္တိမျိုး ကောင်မလေးတွေမွေးလိုက်ကြစမ်းပါ ဝါးးးးးးး လွှတ်တော်ထဲသွားအိပ်လိုက်ဦးမယ် သတင်းထောက်တွေလာရင်လက်တို့ဦးနော်
အဲဒါအဆင့်အတန်းပဲ …အဆင့်အတန်းရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေ အဲလိုမလုပ်ဘူး….
အိမ်အပြင်ထွက်ဖို့တောင် တော်တော်ခက်ခက်ပဲ ….
ကဲ ကိုရွာသားတို့ မြင်တိုင်းကြည့်ကြမှာလားးး
တင်ပြ ကြတယ် ဗျ။ မိန်းကလေးတွေ..မက…ယောကျာ်းတွေ…ပါ ။ မြန်မာပြည်ကြီးလည်း..ဘာတွေ ဖြစ်နေပြီလည်း..မသိ.။
နိုင်ငံရဲ ့ငွေကြယ်ပွင့်တွေ..က စပြီး….လမ်းဖောက်နေတော့…ဘာမဆို..အတုခိုးချင်နေတဲ့.
( မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု.တန်ဖို းအကြောင်း.သိပ်မစဉ်းစား…တဲ ့)..လူငယ်တွေ.က အဲဒီ လမ်းတွေ..ထဲ.လိုက် လျှောက်ကြတယ် ။
မနွေဦး.ရေ…..ဒီပိုစ် ့လေး နဲ ့…. တင်ပြတာကို တင်ပြ လိုက်လို ့..ကျေးဇူးပါနော် ။
မ .. နွေဦး …. တဲ့ …။
များကတော့ ကြောတော့ဘူး …
ဟာဂျင်း ဟာဂျင်း တွေကို… ဟင့်..
ဒီဟာ တွေကြောင့်အမျိုးကောင်းသမီးတွေ သိက္ခာကျ၏။
@ဦးပါလေရာရဲ့”အဆင့်ရှိတဲ့ ဘယ်ယောင်္ကျားလေးကို မှ မမြူဆွယ်နိုင်ပါဘူး…
ပြည့်တန်ဆာတွေ အများဆုံးဝတ်လေ့ရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းပါ။”ဆိုတာ
ဘယ်ဖာတန်းက ကောင်မက လူမြင်ကွင်းမှာ လာပြိး ထွက်ကဲနေတာလည်း မသိဘူး
မိကောင်းဖခင် သားသမိးတွေပါ အပြောအဆို ထိနေတယ် စစ်တပ်ထဲမှာ သွားပြိး အချုပ်ချလိုက်ရင်
ကောင်းမယ် . . . )
စစ်တပ်ထဲပို့ရင်တော့ အချုပ်ထဲမှာ ချ မှာမဟုတ်ဘူး..အိမ်မှာ….
ဒင်းတို ့တွေ မမြင်ဖူးရော့သလား
ဒါမှ မဟုတ်မူးနေကြရော့ သလား
ဒီ မာတုဂါမ …ဖင်ပြတာလောက်တော့
ဆိုပြီး လှန်ပြတဲ့ မာတုဂါမ ရဲ့ဇော်ကန် ့လန် ့
ဖာခန်းမှာ ဖာက ဖော်ပြီး လူပေါ် လူဇော်တွေကို
ဈေးခေါ်နိုင်ဖို့ဘယ် အကောင် ဘယ်ကောင်မက အကြံပေးဖူးလို ့လဲ
ဖာ က ဘယ်လိုတားတား ရှိပြီး ဖာခန်းက မရှိတော့ ဖယ်သာတွေ လမ်းထွက်ပြီး
ဖံခါ နေတာ ဘယ်သူ ဘာပြောချင်သေးသဒုံး……..
kooling blade says:
pyin sa yar tway ka ae myarr gyi par byar
မြန်မာ မိန်းကလေး တိုင်း အဲ့ ပုံ လို တင်ပြ တာမဟုတ်တဲ့ အတွက် .. .. ခေါင်းစဉ် က နဲနဲ စီး နေသလားလို့ပါ။